Warar - Doorka cajaladda EPDM ee badeecada isbuunyada u adkeysanaya kuleylka iyo farsamooyinka dalabka
Doorka cajaladda isbuunyada EPDM ee alaabada isbuunyada kuleylka u adkaysta iyo farsamooyinka dalabka
Cinjirka Butyl wuxuu leeyahay soo saaris gaas aad u fiican iyo u adkeysi kuleyl, waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa soo saarista badeecooyin caag ah oo kuleylka u adkaysta, waxyaabaha caagga ah ee isbuunyada kuleylka u adkaysta waa mid ka mid ah. Qaar badan oo ka mid ah soo saarayaasha waxsoosaarka tuubada gudaha waxay ogyihiin in howsha qalliinka tuubada ee butyl-ka ay ku dari doonto qaddar ku habboon oo ah caag EPDM ama caag dib loo warshadeeyay, ujeedku waa in la kordhiyo nolosha adeegga tubbada gudaha butylka. Markaa ma loo baahan yahay in lagu daro caagga EPDM marka la isticmaalayo butyl caag kuleylka ceyriinka ah ee u adkaysta alaabada xumbada xumbada? Hadday sidaas tahay, waa maxay arrimaha ay tahay in la xuso marka wax lagu darayo?
1. Doorka ay ka sameysan tahay cinjirka 'EPDM roba' ee walxaha xumbada kuleylka u adkaysta ee kuleylka ah
Cinjirka EPDM / caag dib loo warshadeeyay ka dib gabowga gabowga, waxyaabaha caagga ah ee butylku waxay noqon doonaan kuwo jilicsan oo dheg dheg ah ka dib gabowga, sidaas darteed isticmaalka qaddarka ku habboon ee EPDM ee walxaha caagga ah ee xumbada uumiga u adkaysta ee kuleylka ah ayaa ka dhigi kara cilladaha caagga butyl, hagaajinta waxqabadka walxaha xumbo ee isbuunyada u adkeysta uleylka ah.
Cinjir EPDM / caag dib loo warshadeeyay iyo caag butyl, caabbinta heerkulka sare, iska caabin gabowga (gaar ahaan caabbinta ozone) marka loo eego caag butyl; butyl badeecada xumbo-kuleylka u adkaysta qaddarka ku habboon ee caagga EPDM waxay hagaajin kartaa kuleylka u adkaysiga alaabooyinka xumbada, iska caabinta gabowga, si loo sii dheereeyo nolosha adeegga isbuunyada u adkeysanaya kuleylka.
2. Waxyaalaha isbuunyada kuleylka u adkaysta Butyl ee xirfadaha xulashada caagga ah ee 'EPDM'
Adeegsiga walxaha caagga ah ee loo yaqaan 'EPDM rubber' si loo hagaajiyo waxqabadka badeecooyinka isbuunyada u adkeysanaya kuleylka, laga bilaabo kharashka isticmaalka caagga 'EPDM' ee dib loo warshadeeyay. EPDM caag aan la sifeyn ama qashinka alaabada EPDM ee dib loo warshadeeyay oo dib loo habeeyay caag EPDM caabbinta heerkulka sare iyo hooseeya, guryaha ka hortagga gabowga iyo caagga EPDM asal ahaan waa isku mid, qiimaha ayaa aad uga hooseeya asalka asalka ah EPDM, iswaafajinta caagga butyl ayaa ka fiican, waxay hagaajin kartaa waxqabadka ballaaran ee badeecooyinka isbuunyada u adkeysanaya ee kuleylka ah iyada oo loo marayo hoos u dhigista yareynta kharashyada alaabta ceeriin. Noocyada jireed iyo farsamo ee shuruudaha adag ee isbuunyada kuleylka u adkaysta alaabada 2LLYY422-SJ, soosaarayaasha alaabada caagga ah ayaa lagu qasi karaa qaddarka ku habboon ee caagga EPDM ee caagga butyl si loo hubiyo tayada wax soo saarka.
3. Sida loo hagaajiyo caaga EPDM iyo xawaaraha vulacanization caag butyl
Sida aynu wada ogsoonahay, foojignaanta waxyaabaha caagga ah ee isbuunyada ah iyo xumbayntu waxaa la wada sameeyaa isla waqtigaas, xawaaraha foosha ee ka badan xawaaraha xumbada ama ka dhakhso badan xawaaraha xumbada ayaa saamayn doonta saamaynta xumbada ee alaabada xumbada iyo waxtarka xumbada; waxqabadka caagga ah ee butyl iyo EPDM, xaaladaha foosha way ka duwan yihiin, sidaa darteed soosaarayaasha badeecada caaggu waa inay ahaadaan nashqad macquul ah ee nidaamka foosha si loo hubiyo in xumaanta iyo xumbayntu isla mar ahaantaa. Guud ahaan, soosaarayaasha badeecada cinjirka ah waxay dooran karaan baaburka baaruudda, iyadoo la adeegsanayo dardar-geliyaha caagga ah ee loo yaqaan 'DM accelerator', isticmaalka wakiilka xumbaynaya xumbada OBSH, isku-duwidda wanaagsan ee udhaxeysa xawaaraha foosha iyo xumbada xumbada.
Isticmaalka cinjirka 'EPDM' ee dib loo warshadeeyay ama cinjirka EPDM si loo hagaajiyo waxqabadka iyo nolosha badeecada xumbada kuleylka u adkaysta ee kuleylka kuleylka ah, soosaarayaasha wax soo saarka caaggu sidoo kale waxay u baahan yihiin inay si habboon u hagaajiyaan nooca iyo xaddiga wakiilada kale ee iswaafajinaya ee ku jira caanaha, waxaad isticmaali kartaa semi - xoojinta kaarboonka xoojinta madow, jilicsanaanta saliida saliida, paraffin wax anti-gabowga, oo ay weheliso isticmaalka zinc oxide, stearic acid iyo magnesium oxide, si loo sii wanaajiyo waxyaabaha butyl / EPDM kuleylka u adkaysta kuleylka waxsoosaarka dhamaystiran Isticmaalka zinc oxide , stearic acid iyo magnesium oxide waxay sii wanaajin kartaa waxqabadka guud iyo nolosha adeega ee badeecada isbuunyada u adkaysata butyl / EPDM.